साउदी अरबका राजकुमारको होटल नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीले किने, भारतमा ह*ङ्गामा: हेर्नुहोस यसको मूल्य ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/साउदी अरबका राजकुमारको होटल नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीले किने, भारतमा ह*ङ्गामा: हेर्नुहोस यसको मूल्य !
साउदी अरबका राजकुमारको होटल नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीले किने, भारतमा ह*ङ्गामा: हेर्नुहोस यसको मूल्य !
साउदी अरबका राजकुमारको लक्जरी होटेल नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीले किनेका छन्। साउदी अरेबियाका राजकुमार अल वालिड विन तलालले उक्त होटेलको स्वामित्व चौधरी ग्रुपलाई झण्डै ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा विक्री गरेका हुन्। कोरोना महामारी शुरु हुनु अगाडि नै उक्त होटेल खरिद बिक्रीको डिल भएको थियो । केही महीनाअघि साउदीका यी राजकुमारलाई भ्र’ष्‍टाचार अ’भियोगमा प’क्राउ गरिएको थियो। आर्थिक समस्या भएपछि उनले होटल बेचेका हुन् ।
भ्र’ष्टा’चारलगायत आ’रोपमा स्वदेशमा प’क्राउ परेको महिनौँपछि साउदी राजकुमारले आफ्नो छरिएर रहेको लगानीलाई पुनः संगठित गरिरहेका छन्। साउदी राजकुमार र चौधरी ग्रुपबीच भएको सम्झौताका जानकार एक सल्लाहकारलाई उधृत गर्दै उक्त अनलाइनले जनाएअनुसार २.८ अर्ब केन्याली मुद्रामा उक्त सम्झौता भएको हो। यो भनेको नेपाली करिब ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हो। भ्र’ष्टाचारलगायत आ’रोपमा स्वदेशमा प’क्राउ परेको महिनौँपछि साउदी राजकुमारले आफ्नो छरिएर रहेको लगानीलाई पुनः संगठित गरिरहेका छन्।
पारिवारिक मेलमिलाप र वैवाहिक जीवन सुखमय भएमा मात्र जीवन सुखद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । आफ्नो जिवनमा आउने जीवन साथी उत्कृष्ट परोस् भन्ने हरेक पुरुषको चाहाना हुन्छ । उस्तै परिवारले पनि बत्तिसै लक्ष्निले युक्त बुहारीको आस राखेका हुन्छन् ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक व्यक्तिको भविष्य कस्तो रहने भन्ने बारे अडकल लगाउने गर्दछन् । फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ ।
विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा बुहारी बन्न सक्छन्।
वृष राशि हुने युवतीहरु धेरैनै समझदार हुन्छन्। आफ्नो मात्र खुशी मात्र नभई पूरै परिवारको खुशीलाई यस राशि हुनेहरु प्राथमिकतामा राख्छन्। अभावमा पनि चित्त बुजाउन सक्ने हुँदा परिवार माथि आइलाग्ने हरेक दुखमा वृष राशि हुने बुहारीहरुले साथ दिन्छन्। शहनशक्तिले भरिपूर्ण हुनाले पनि यस राशि हुने बुहारीहरु उत्कृष्ट मानिन्छन्। निर्णय लिने मामलामा पनि यस राशि हुनेहरु समझदार मानिन्छन्।
कन्या राशि हुने महिलाहरु शान्त स्वभावका हुन्छन्। कुनै पनि विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। कलह देखि पनि कन्या राशिहुनेहरु टाढा रहन रुचाउँछन्। जसकारण बुहारीको रुपमा कन्या राशि हुने युवतीहरु उदाहरणनै बन्न सक्छन्। परिवारको हरेक कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाउने हुँदा परिवार खुशी रहन सक्छ। आर्थिक मामिलामा पनि कन्या राशि हुने बुहारीहरु बुद्धिमानी मानिन्छन्।
मीन राशि हुने बुहारीहरु पनि उत्कृष्ट मानिन्छन्। उनीहरु आफू भन्दा पनि परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। परिवारमा आइपर्ने दुख माथि उनीझरुको विशेष निगरानी रहने गर्छन् दुखको समयमा परिवारलाई उचित सल्लाह दिन्छन्। यति मात्र नभई उचित कदम चाल्न सक्ने समेत यस राशि हुने बुहारीहरुमा क्षमता हुन्छ। बाहिरी उकसाहटमा कुनै पनि कदम चाल्नु अगाडी धेरै सोच्ने हुँदा पनि मीन राशि हुने बुहारीहरु लक्ष्मी समान हुन्छन्।
सुन्दा अच’म्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्य’ता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता ख ड्का
”आ’टेको सो’चेको काम ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे’वास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं”
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो कठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ
अचम्मको घटना, डडेल्धुराकी मायाका जुम्ल्याहामध्ये एक वच्चा थैलीसहित जन्मिए
कोठा भाडा बचाउन यी युवतीले गरीन् यस्तो काम, जसले संसारलाई बनायो चकित्